Shikhar Post » एनआरएनएको नेतृत्वका लागि कुमार पन्त र कुल आचार्य भिड्दै
एनआरएनएको नेतृत्वका लागि कुमार पन्त र कुल आचार्य भिड्दै
काठमाडौं, २७ असोज । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)को आगामी नेतृत्वका लागि कुमार पन्त र कुल आचार्य भिड्ने निश्चित भएको छ । गोरखा फुजेलका पन्त जर्मनीबाट प्रतिनिधित्व गर्छन् । १९९७ मा जर्मनी पुगेका पन्तले राजनीतिशास्त्रमा स्नातक गरेका छन् । उनी बौद्धिक र परिपक्क नेताका रुपमा परिचित छन् । उनको मुल व्यवसाय होटल हो ।
उनको जर्मनी, बेल्जियम, स्वीजरल्याण्डमा गरी २९ वटा होटल छन् । सन् २००४ सालमा एनआरएनए जर्मनी राष्ट्रिय परिषद् गठन गरी क्षेत्रीय सदस्य बनेर यो अभियानमा लागेका पन्त सन् २००९ मा अन्तराष्ट्रिय समन्वय परिषद्, २०११ मा युरोप क्षेत्रको संयोजक निर्वाचित उनी २०१३ देखि १५ सम्म अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को महासचिव भएका थिए ।
सन् २०१५ मा उपाध्यक्ष भएका पन्त २०१७ देखि हालसम्म पनि उपाध्यक्ष नै छन्। उनी एनआरएनएको भवन निर्माणका लागि लगानी जुटाउने संयोजकसमेत हुन् । पन्त सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) निकट उम्मेदवार मानिएको छ । पन्तको पुरै प्यानल घोषणा हुन भने बाँकी छ ।
आफ्ना संयन्त्रमार्फत कृषि, पर्यटन, जलस्रोत, सीपयुक्त जनशक्ति उत्पादनलगायत क्षेत्रमा गैरआवासीय नेपाली संघले राज्यलाई सघाउने उनको भनाई छ । अग्रजहरूले निकै दुःख गरी जन्माएर हुर्काएको यो संस्थाको आयुलाई सुदीर्घ बनाउन र यसको जीवनलाई अझ धेरै सार्थक तुल्याउन नयाँ–नयाँ पिँढीलाई आबद्ध गराउँदै लैजानु पर्ने उनको भनाई छ । उनी भन्छन्, ‘विभिन्न उद्देश्य, अवस्था र बाध्यताले बिदेसिएका हरेक नेपाली तथा तिनका सन्तान दरसन्तानले यो संस्थालाई आफ्नो ठान्ने अवस्था निर्माण गर्नु छ । र, जे–जति सकिन्छ, आफ्नो क्षेत्रबाट स्वदेशको समृद्धि र सान बढाउन योगदान गर्नु छ ।’
भिजन २०२० एन्ड बियोन्ड कार्यान्वयनमा उनको जोड छ । भन्छन्, ‘ममहासचिव र उपाध्यक्षका रूपमा काम गर्दाका अध्यक्ष डा। शेष घलेले निकै मिहिनेतसाथ अगाडि ल्याएको यो अवधारणा कार्यान्वयन गर्न सकियो भने संस्थाले आज सामना गरिरहेका यक्ष प्रश्नको समाधान सम्भव हुनेछन् । संस्थाको दिगोपना, संगठनको सुदृढीकरण, सञ्जालको व्यापकता र सबै तह, तप्का र क्षेत्रको समावेशीकरण यसका प्रमुख उद्देश्य हुन् ।’
आचार्यको प्यानल घोषणा
बर्तमान उपाध्यक्ष कुल आचार्यले सोमबार दिउँसो पत्रकार सम्मेलन गरेर प्यानल घोषणा गरेका छन् । पर्वत घर भएका आचार्य बेलायत लण्डनमा बस्छन् । उनी पनि होटल व्यवयासी नै हुन् । आचार्य एनआरएनए युके सदस्य, उपाध्यक्ष, अध्यक्ष, युरोप संयोजक हुँदै हाल उपाध्यक्ष छन् ।
आचार्यको प्यानलबाट महासचिवको उम्मेदवार बेल्जियमबाट जानकी गुरुङ बनेकी छिन् ।
आचार्य समूहमा यसअघि अमेरिकाका डा.केशव पौडेल र मध्यपूर्वका डीबी क्षेत्रीले पनि महासचिव पदका लागि दावी गर्दै आएका थिए । अमेरिकाका डा. पौडेलले उपाध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी दिने भएका छन्। कांग्रेस निकट मानिएको आचार्य समूहबाट उपाध्यक्षमा डा. पौडेलसँगै, मन केसी (अष्ट्रेलिया), नरेन्द्र भाट (मध्यपूर्व), रबिना थापा (अमेरिका)ले उम्मेदवारी दिने भएका छन् ।
यस्तै वर्तमान सह–कोषाध्यक्ष सोम सापकोटाले कोषाध्यक्षमा उम्मेदवारी दिने भएका छन् । पत्रकार सम्मेलनमा आचार्यले एनआरएनएमा आफ्नो १२ वर्षको अनुभव र संस्थामा दिएको योगदान आफ्नो जित्ने आधार भएको बताए ।
उनले झन्झटमुक्त गैर आवासीय नेपाली नागरिकता, लगानीको प्रत्याभूति, मर्या्दित तथा सुरक्षित वैदेशिक रोजगार, विदेशी लगानीकर्तालाई नेपालमा लगानी गर्न प्रोत्साहित गर्ने, ब्रेन ड्रेनबाट ब्रेन गर्ने, संस्थागत सुधारमा भिजन २०२० एन्ड वियोड अवधारणालाई कार्यान्वयन तहमा लैजाने, सडक सुरक्षा, पर्यटन लगायत विषयलाई प्राथमिकताका साथ अघि सारेका छन् ।